Ubungozi benyama ebomvu
UKUDLA inyama ebomvu kabili ngesonto kwenyusa amathuba okusheshe ufe. Isithombe: Sithunyelwe
BEN SPENCER | February 19, 2020
ONGOTI baveza ukuthi ukudla inyama ebomvu kabili nje vo ngesonto kwenyusa amathuba okufa. Inyama egayiwe efana nobhekeni, amasoseshi kanye nezinye izinyama ezibomvu kunyusa amathuba okusheshe ufe. Ucwaningo oluthathe iminyaka ewu-30 luveze ukuthi inyama yenkukhu yenyusa ubungozi besifo senhliziyo, kodwa hhayi amathuba okufa ngaphambi kwesikhathi.
Ukudla ufishi, akunabo ubungozi obutholakele. Abacwaningi basemanyuvesi ase-U.S, iNorthwestern University eseChicago neCornell University eseNew York, bacubungule cishe abantu abangu-30 000 iminyaka engu-30. Bathole ukuthi ukudla inyama ebomvu kabili ngosuku kwenyusa amathuba okusheshe ufe ngo-3%.
"Umehluko omncane, kodwa ekufanele kuzanywe ukuthi kwehliswe ukudla inyama ebomvu nenyama egayiwe. Ukudla inyama ebomvu kuphinde kuyamaniswe nezinye izifo ezifana nomdlavuza," kusho uNorrina Allen waseNorthwestern.
Ukudla inkukhu kabili ngesonto kwenyusa izifo ezihambisana nenhliziyo ngo-4%. Abacwaningi baphinde baveza ukuthi ubungozi buhambisana nokuthi umuntu uyipheka kanjani inkukhu yakhe. Inkukhu ethoswe ngamafutha ingaba nobungozi obukhulu uma iqhathaniswa nenkukhu eyosiwe.
UDkt Victor Zhong waseCornell uthe: "Ukunciphisa ukudliwa kwalezi zinhlobo zenyama kungaba yindlela ebalulekile yokwehlisa ubungozi besifo senhliziyo ngo-7%, nango-4% kwinyama ebomvu engagayiwe," usho kanje.
USolwazi Linda Van Horn waseCornell uthe: "Ufishi, ukudla kwasemanzini kanye nezithelo ezifana namakinati, ubhontshisi nokunye, ukudla okunomsoco okungadliwa esikhundleni senyama."
Abacwaningi base-United Kingdom balwamukele ucwaningo, kodwa bathi, imiphumela incike ekuhlolweni kokudla komuntu, okujwayele ukushaya eceleni.